Indoor uye panze midziyo - China Gormeet Plastic
chikamu ichi zvinosanganisira dzisiri dziya ichivhuvhuta moldings zvigadzirwa, akadai: Storage mukamuri ichi nyore kuungana panze okuchengetera rakadeurwa rinogona kuiswa pose necheseri kana achipfeka apo okuchengetera kunodiwa. The panze mumunda okuchengetera rakadeurwa ane sloped denga. Zvakakwana kuchengeta patsangadzi midziyo yenyu, mitambo giya, uye pemarata fenicha, rakadeurwa ichi anokwanisa kuita zvinhu zvizhinji uye yakasimba. Bhabhadzira zvigadzirwa Kubva inotakurika cabins kune huru panze imbwa dzimba, tine anodiwa awnings uye nenhumbi kuti zvakanakisisa zvienderane perso rako ...
Kuumbwa Exterior Options
1. Rainbow pamusoro Colors
2. Custom Logo Plate pamwe Kunoumbwa
3. Akamutswa Lettering
4. Full Custom muvharo mhango Plate
5. kuisira Feature
chikamu ichi zvinosanganisira dzisiri dziya ichivhuvhuta moldings zvigadzirwa, akadai:
Izvi nyore kuungana panze okuchengetera rakadeurwa rinogona kuiswa pose necheseri kana achipfeka apo okuchengetera kunodiwa. The panze mumunda okuchengetera rakadeurwa ane sloped denga. Zvakakwana kuchengeta patsangadzi midziyo yenyu, mitambo giya, uye pemarata fenicha, rakadeurwa ichi anokwanisa kuita zvinhu zvizhinji uye yakasimba.
Kubva inotakurika cabins kune huru panze imbwa dzimba, tine anodiwa awnings uye nenhumbi kuti zvakanakisisa zvienderane nezvauri, kukura uye dzinotaurwa pachivanze yenyu. Hazvinei kuti hwechipfuwo mhando zvaunazvo, mumwe manyorerwo ane zvakasiyana siyana hukuru, saka unogona kusarudza dzakakodzera makuru kana madiki imbwa imba nokuda kwako dzinovaraidza.
The itsva Pet Gear Step uye Ramp anopa dzinovaraidza pamateru nyoro inoita nyore kuti kuti asvike kangas, mibhedha, uye zvakawanda. Zvakanyorwa chakagadzirwa Zvinokosha zvakaisvonaka rakaumbwa epurasitiki uye anouya kufanosarudza ruvara mikana. The kapeti iri bvisika uye muchina wachika. Akazvipira nyaradzo uye kuchengeteka kwako dzinovaraidza, kuvandudza upenyu yako neshamwari mana makumbo marefu tichibatsirwa Pet Gear.
Sezvo ice bhokisi, kaviri nemasvingo cover kusika mukuru kuputira. Unogona gadzirisa saizi, ruvara, ukobvu ari kutonhora.
Kunwa zvitubu epurasitiki zvikamu, mapurasitiki madhoo, mapurasitiki nyere, mapurasitiki mavhiri, etc ..